China FK617 ọkara akpaka ụgbọelu Rolling Labeling Machine ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ya | Fineco
FK617 ọkara akpaka ụgbọelu Rolling Machine
FK617 kwesịrị ekwesị maka ụdị nkọwa dị iche iche nke square, flat, curved and irregular ngwaahịa na akara elu, dịka igbe igbe, igbe karama ịchọ mma, igbe convex.
FK617 nwere ike nweta akara ngosi mkpuchi ụgbọelu zuru oke, akara ngosi ziri ezi nke obodo, akara ntanetị ọtụtụ aha na akara akara ọtụtụ, nwere ike idozi ohere nke aha abụọ, nke a na-ejikarị na nkwakọ ngwaahịa, ngwaahịa eletriki, ihe ịchọ mma, ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa.
③ FK617 nwere ọrụ ndị ọzọ iji mụbaa: nhazi ngwa nhazi ma ọ bụ ngwa nbipute ink-jet, mgbe ị na-ede aha ya, bipụta nọmba ntinye doro anya, ụbọchị mmepụta, ụbọchị dị irè na ozi ndị ọzọ, ịdebanye aha na ịdebanye aha ga-arụ n'otu oge, melite arụmọrụ.
Usoro nhazi FK617 dị mfe ma ọ dị naanị mkpa ịkwaga ịdị elu nke wiil pịa, ọnọdụ nke ihe mmetụta labeelu na ihe mmịfe slide. Usoro mmezi ahụ erughị nkeji 10, na ịdebanye aha ziri ezi dị elu, ọ na-esikwa ike ịhụ nhụjuanya ahụ. Ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka ngwaahịa nwere obere mmepụta ihe.
FK617 ohere gbasara ala gbasara 0.50 stere.
⑥ Igwe Nkwado Igwe.
1.Pịa mgba ọkụ ahụ mgbe etinyerelarị ngwaahịa ahụ, igwe ahụ na - ejikọ ngwaahịa ahụ.
2.Mgbe ọzọ mmịfe ahụ na-agagharị na ọzọ na-aga n'ihu, mgbe ihe mmetụta ahụ na-achọpụta na slide ahụ eruola otu ebe, igwe ahụ na-ezipụ akara ahụ.
3.Mgbe ahụ, wiil ahụ na-agbanye akara ahụ na ngwaahịa ahụ ruo mgbe a kpọpụrụ otu akara.
4.Last, hapụ ngwaahịa na igwe ahụ ga-eweghachite akpaka, usoro ntinye aha agwụla.
Akụkụ a nke ụkpụrụ maka nyocha na mmepe nke aka anyị, ọ bụrụ na ọ nwere mmasị, ịnabata ịkpọtụrụ.
Lab Aha mmado: akara mmado, ihe nkiri, koodu nlekọta kọmputa, koodu mmanya.
Products Ngwaahịa ndị achọrọ: Ngwaahịa achọrọ ka akpọrọ ya na mbadamba, ọdịdị aak, gburugburu, concave, convex ma ọ bụ nke ọzọ.
③ Ngwa ụlọ ọrụ: A na-ejikarị ya na ntecha, nri, ihe eji egwuri egwu, kemịkalụ, elektrọnik, ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Examples Ihe omuma atu: shampoo mpempe akwụkwọ ntanye, ntanye igbe ntanye, mkpuchi karama, akara akara plastic, wdg.
Nkọwapụta aha Nrapado ihennyapade, uzo ma ọ bụ opaque
Label Ndidi Mm 0.5mm
Ike (PC / min) 15 ~ 30
Ezu karama size (mm) L: 20 ~ 200 W: 20 ~ 150 H: 0.2 ~ 120; enwere ike ịhazi ya
Suit labeelu size (mm) Nkebi: L: 15-200; W (H): 15-130
Nha igwe (L * W * H) ≈960 * 560 * 930 (mm)
Ngwugwu ibu (L * W * H) ≈1180 * 630 * 980 (mm)
Voltaji 220V / 50 (60) HZ; Enwere ike ịhazi ya
NW (KG) ≈ 45.0
GW (KG) ≈ 67.5
Label Roll NJ: Ø76mm; OD: ≤240mm
Ikuku ikuku 0.4 ~ 0.6Mpa
1 Label tree Debe aha aha
2 Ndagharị Ikuku labeelu mpịakọta
3 Label mmetụta Chọpụta akara
4 Na-ewusi sịlịnda Drivegbọala ihe na-eme ka ihe dị ike
5 Ngwa ike Ezigbo labeelu mgbe labeling na-eme ka ọ na-arapara uko
6 Product eletrik Emere omenala, mezie ngwaahịa site na elu na ala mgbe ị na-ede aha
7 Ebu Na-akwagharị site na traction moto iji see akara
8 Ngwaọrụ traction Na-akwagharị site na traction moto iji see akara
9 Hapụ Akwụkwọ imegharị Egweri akwụkwọ ntọhapụ
10 Mberede Kwụsị Kwụsị igwe ma ọ bụrụ na ọ na-agba ọsọ
11 Igbe Eletriki Debe nhazi kọmputa
12 Ihuenyo mmetụ aka Ọrụ na ịtọ ntọala
13 Air Circuit Myọcha Iyo mmiri na adịghị ọcha
4) Alarm Function: Igwe ahụ ga-enye mkpu mgbe nsogbu dị, dị ka nkwụsị akara, akara agbajiri, ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ.
Q: you bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe?
A: Anyị bụ ndị na-emepụta ihe dị na Dongguan, China. Ndị ọkachamara na igwe nyocha na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa ihe karịrị afọ 10, nwee ọtụtụ puku okwu ndị ahịa, na-anabata maka nnyocha ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Ajụjụ: Kedu ka esi jide n'aka na njirimara aha gị dị mma?
Azịza: anyị na-eji siri ike ma dịgide adịgide n'ibu ekupụ na adịchaghị electronic akụkụ ndị dị otú ahụ dị ka Panasonic, Datasensor, Ọrịa ... iji jide n'aka na ike labeling arụmọrụ. e ọdịda Chinese “New High-Tech Enterprise” na 2017.
Q: Olee otú ọtụtụ igwe gị factory nwere?
Azịza: Anyị na-emepụta ọkọlọtọ na omenala mere nrapado labeling machine.By akpaaka ọkwa, e nwere ọkara akpaka labelers na akpaka labeler; Site ngwaahịa udi, e nwere gburugburu ngwaahịa labelers, square ngwaahịa labelers, oge ufodu ngwaahịa labelers, na na. ngwaahịa gị, ịnye aha ngwọta ga-enye ya.
Q: Gịnị bụ gị mma nkwa okwu?
Fineco mejuputara oru nke post,
1) Mgbe ị kwadoro usoro, ngalaba nhazi ga-eziga usoro ikpeazụ maka nkwenye gị tupu ị rụpụta.
2) Onye na-ese ihe ga-agbaso ngalaba nhazi iji hụ na a na-edozi akụkụ nke ọ bụla n'ụzọ ziri ezi na n'oge.
3) Mgbe emechara akụkụ ahụ niile, onye na-emepụta ihe na-ebufe ọrụ na Mgbakọ Assembly, nke kwesịrị ịchịkọta akụrụngwa n'oge.
4) Ibu ọrụ zigara Ndozi Dept na igwe gbakọtara .Sale ga-enyocha ọganihu na nzaghachi nye ndị ahịa.
5) Mgbe nyochachara vidiyo nke ndị ahịa / nyocha ụlọ ọrụ, ahịa ga-ahazi nnyefe.
6) Ọ bụrụ na ndị ahịa nwere nsogbu n’oge itinye ha n'ọrụ, Ahịa ga-ajụ ndị na-ere ahịa ga-edozi ya ọnụ.
Ajụjụ: Iwu nzuzo
A: Anyị ga-edebe ihe niile ndị ahịa anyị mepụtara, akara, na nlele na ebe anyị na - edebe akwụkwọ, ma ghara igosi ndị ahịa yiri ya.
Q: Enwere usoro ntinye ọ bụla mgbe anyị natara igwe?
A: Na mkpokọta ị nwere ike itinye ihe ngosi ahụ ozugbo a ga-anata ya, n'ihi na anyị ejiri ya nlele ma ọ bụ ngwaahịa ndị yiri ya gbanwee ya nke ọma. A ga-enye akwụkwọ ntuziaka na vidiyo.
Q: Kedu ụdị ihe eji arụ ọrụ igwe gị na-eji?
A: Self-nrapado ihennyapade.
Q: Kedu ụdị igwe nwere ike ịchọta akara m chọrọ?
A: Pls na-enye ngwaahịa gị na akara aha (eserese nke ihe akpọrọ akpọrọ ga-enyere gị aka), mgbe ahụ, a ga-atụ aro usoro ntinye aha kwesịrị ekwesị.
Ajụjụ: Enwere mkpuchi ọ bụla iji kwado na m ga-enweta igwe dị mma m kwụrụ maka ya?
A: Anyị bụ ndị na-na saịtị na saịtị soplaya si Alibaba. Nkwenye ahia na-enye nchebe dị mma, nchedo oge na 100% nchebe ịkwụ ụgwọ nchebe.
Q: Kedu ka m ga-esi nweta ngwa ọrụ dị iche iche?
A: Non-wuru mebiri emebi mapụtara ga-zitere kpamkpam na mbupu free n'oge 1 afọ akwụkwọ ikike.
Nke gara aga: FK616A ọkara Automatic Sealant Labeling Machine
Osote: FK618 ọkara Automatic High nkenke ụgbọelu labeling Machine
Ọkara Automatic Label Applicator Machine
Ọkara Akpaaka Label Dispenser
Ọkara Automatic Labeler
Ọkara akpaka Bottle Labeling Machine
Ọkara Automatic Ewepụghị Labeling Machine
FK811 Igwe Igwe Na-akpaghị Aka
FK618 ọkara Automatic High nkenke ụgbọelu Label ...
FK616A ọkara Automatic Sealant Labeling Machine
FK814 Automatic Top & Ala Labeling Machine
FK616 ọkara Automatic 360 Celsius Rolling Labeling Mac ...